Vaenzi uye Kuratidzwa Zvinoitwapo: Mahofisi eZvapupu zvaJehovha kuPatterson, Wallkill, neWarwick
Sarudza Nyika Albania Angola Argentina Armenia Australia Barbados Belgium Benin Bolivia Brazil Britain Bulgaria Burundi Cameroon Canada Central African Republic Chile Colombia Côte d’Ivoire Croatia Cuba Denmark Dominican Republic Ecuador Ethiopia Fiji Finland France Georgia Germany Ghana Greece Guam Haiti Hong Kong Hungary India Indonesia Italy Japan Kazakhstan Kenya Korea Kyrgyzstan Liberia Macedonia Madagascar Malawi Mexico Moldova Mozambique Myanmar Netherlands New Caledonia Nigeria Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Romania Rwanda Senegal Serbia Sierra Leone Slovakia Slovenia Solomon Islands South Africa Spain Sri Lanka Suriname Tahiti Taiwan Thailand The Democratic Republic of the Congo Trinidad and Tobago Uganda Ukraine United States Venezuela Zambia Zimbabwe
Musati maronga kushanyira mahofisi edu ari kuUnited States, tangai mabhuka. Shandisai malink ari pasi apa kuti mubhuke zuva ramunoda kushanyira hofisi imwe neimwe. Zivai kuti pazuva rimwe chete munokwanisa kungoona nzvimbo mbiri musingaiti zvekumhanya-mhanya.
Munofanira kugara mabhuka kana muchida kuzoshanyira chero hofisi yedu iri muUnited States pasinei nekuti muri kuronga kushanya makawanda sei.
Boka Revanhu Vasingasviki 20
Bhuka kuzoshanyira mahofisi ari muPatterson
Bhuka kuzoshanyira mahofisi ari muWallkill
Bhuka kuzoshanyira mahofisi ari muWarwick
Boka Revanhu 20 Zvichikwira
Shandisai jw.org pakutumira chikumbiro chenyu chekubhuka kushanya makawanda kuti muzoona mahofisi edu ari muPatterson, muWallkill, kana kuti muWarwick.
Bhukai kuzoshanya muri boka revanhu 20 zvichikwira
Shandisai fomu riri pajw.org kuti mudzime zvamakabhuka.
Tangai mabhuka kuzoshanyira mahofisi edu musati maronga mafambiro amuchaita.
8:00 a.m. kusvika 11:00 a.m. uye 1:00 p.m. kusvika 4:00 p.m.
Kunotora maawa maviri
Tinogadzira mifananidzo inozoiswa mumabhuku edu uyewo tinorekodha mavhidhiyo nezvekuteerera. Vanenge vashanya vanoudzwawo muchidimbu nezvezvikoro zveBhaibheri zvinoitwa pano.
Tinoprinda mabhuku anotsanangura Bhaibheri anopfuura mamiriyoni 25 gore negore. Tinotumira mabhuku emitauro inopfuura 360 kumapazi ari pasi rese uyewo kuungano dzinopfuura 15 000 dzeZvapupu zvaJehovha dziri muUnited States, Canada, uye muCaribbean.
Vanhu vanogona kutanga kuuya kuWarwick kuzoona zvinoitwapo kutanga musi weMuvhuro 3 April 2017. Tangai mabhuka pajw.org kuzoshanyira mahofisi edu musati maronga mafambiro amuchaita.
8:00 a.m. kusvika 4:00 p.m.
(Kutenderera mega muchiona zvinoitwapo)
8:00 a.m. kusvika 11:⁠00 a.m. uye 1:00 p.m. kusvika 4:00 p.m.
(Kuratidzwa nemumwe zvinoitwapo)
Kutenderera mega muchiona zvinoitwapo
Bhaibheri Uye Zita raMwari. Apa panenge pachiratidzwa maBhaibheri asingachanyanyi kuwanika uye panotaurwa muchidimbu kuti zita raMwari rakachengetedzwa sei muMagwaro pasinei nekuti vanhu vaiedza kuribvisa. Panenge painewo nzvimbo inoiswa mamwe maBhaibheri asingachanyanyi kuwanika nezvimwe zvinhu zvekare zvine chekuita neBhaibheri izvo zvinozopota zvichibviswa pachiiswa zvimwe.
Vanhu Vezita raJehovha. Apa panenge paine zvinhu zvinoratidza nhoroondo yenhaka yezvekunamata yeZvapupu zvaJehovha. Panewo mapikicha, mashoko akataurwa nevanhu, uye zvimwe zvinhu zvekare zvinoratidza kutungamirira, kudzidzisa uye kuronga kwaiita Jehovha vanhu vake kuti vaite kuda kwake.
Mahofisi Makuru​—Mabasa Anoratidza Kutenda. Apa pane mashoko anobudiswa achitsanangura basa remakomiti eDare Rinotungamirira uye kubatsira kwaanoita Zvapupu zvaJehovha kuti zvitevedzere zvinotaurwa nemagwaro panyaya yekuungana pamwe chete, kudzidza zvinhu zvine chekuita nekunamata uye kuratidzana rudo.
Kuratidzwa nemumwe zvinoitwapo
Munotenderera kwemaminitsi 20 muchiratidzwa nzvimbo dzine Mahofisi neServices Building uye dzimwewo nzvimbo dziri paWarwick.
Mahofisi Uye Kuratidzwa Zvinoitwapo: United States